Ikati lase-Abyssinia, konke okuphathelene nalolu hlobo lwamakati | Amakati kaNoti
El Ikati lase-Abyssinian Kuyisilwane esithandwa kakhulu: kuyadlalwa kakhulu futhi indlela esiziphatha ngayo yinhle kakhulu. Ngaphezu kwalokho, bekungolunye lwezinhlanga zokuqala ukwamukelwa, ngakho-ke njengoba kungaziwa kahle kakhulu, kusalokhu kungashiwo ukuthi kushintshe kakhulu maqondana nabase-Abyssini bamakhulu amabili eminyaka adlule, okuyilapho kwakukhulunywa khona okokuqala khona. isilwane encwadini "Amakati, Amaphuzu abo" ogama lakhe linguGordon Staples.
Kubuye kube yi- i-feline yezenhlalo kakhulu, ngakho-ke kuhle njengomlingani wokudlala wezingane ... hhayi izingane 😉. Ungathanda ukuhlangana naye? Asiye lapho.
1 Umlando wase-Abyssinian
2 Izici zomzimba zohlobo
4 Ukunakekela lolu hlobo
4.3 Udokotela wezilwane
5 Impilo yase-Abyssinian
5.1 Kubiza malini ikati lase-Abyssinia?
5.2 Izithombe zekati lase-Abyssinian
Ikati lase-Abyssinia, yize libukeka ngenye indlela, aliveli e-Abyssinia (namuhla kungaba yi-Ethiopia), kepha kunenkolelo yokuthi livela eGibhithe. Okwaziwayo ukuthi ikati lokuqala lolu hlobo elakhonjiswa eNgilandi laqhamuka e-Abyssinia. Ngo-1874 kwashicilelwa incwadi "Amakati, Amaphuzu Awo" engikhulume ngayo ekuqaleni, yenza incazelo yokuqala yekati elalibizwa ngokuthi uZula, u-feline wokuqala wase-Abyssinia owayephethwe nguNkk. Barrett-Lennard futhi owayefike eNgilandi ngo-1868 umkhankaso wezempi ovela e-Abyssinia Umzimba wakhe wawunamahhashi futhi ungenamahloni, kunalokho mncane, kodwa eqinile futhi enemisipha.
Kodwa kunabantu abathanda ukucabanga ukuthi lolu hlobo empeleni luvela ezinqamulezweni eziphakathi kwamasiliva ahlukahlukene nonsundu namakati omdabu ase-England, i »I-British Bunny».
Kunoma yikuphi, ngasekupheleni kwekhulu le-XIX lolu hlobo lwaluvele lwaziwa, kwathi ngo-XX lwabhalwa. AmaNgisi aqala ukuzalanisa ngendlela ehlelekile, kwathi ngo-1909 kwafika ithole lokuqala lase-Abyssinia e-United States. Ngawo-1930, abantu base-Abyssini babengeniswa bevela eNgilandi ababezoba yibo ababezothola izinhlelo zamanje zokuzalanisa.
Izici zomzimba zohlobo
Leli kati libukeka kakhulu njenge-cougar, noma ngabe liyisikali esincane kakhulu 🙂. Inomzimba ohlanjululwe futhi oshesha kalula, ukubuka okuthintayo nekhanda elingunxantathu elihle kakhulu. Kepha ake sibheke ukuthi yini indinganiso yakho:
Ikhanda: umumo ongunxantathu, onezindlebe eziyindilinga namehlo aluhlaza okotshani noma asagolide amise okwe-alimondi
Umzimba: mncane, mncane, unemisipha. Imilenze iyalingana nawo wonke umzimba. Umsila mude futhi unamahlathi.
Uboya: izinwele zifushane, ziluhlaza okwesibhakabhaka, isiliva, isorrel noma i-fawn.
Isisindo: phakathi kuka-4 no-6 kilos.
Isikhathi sokuphila: Iminyaka 13-14.
Leli yikati elikhuthele kakhulu, elithanda ukusebenzisa isikhathi salo ukukhuphuka, ukudlala noma ukuhlola. Ngalesi sizathu, noma ngubani ofuna ukuba nesilwane salolu hlobo ekhaya, kufanele uthenge ama-scraper aphezulu afinyelela ophahleni kanye / noma ukubophela amashalofu athile endlini ukuze ukwazi ukuhlangabezana nezidingo zakho.
Uhlakaniphe kakhulu futhi uyathandana, uzwana kakhulu nezingane. Mhlawumbe okubi kuphela lokho akathandi ukuba yedwa, ngakho-ke kuyalulekwa ukuthi uchithe isikhathi esiningi ngangokunokwenzeka naye, futhi unikele leyo mizuzu noma amahora ukuze ube senkampanini yesilwane, kungaba ukudlala ibhola noma ukuphumula.
Ukunakekela lolu hlobo
Ikati lase-Abyssinia, njenganoma yiliphi elinye ikati eliba yingxenye yomndeni, kufanele lithole uchungechunge lokunakekelwa nokunakwa okuqinisekisa inhlalakahle yalo:
Kungcono kakhulu mnike okuphakelayo okusezingeni, ngaphandle kokusanhlamvu. Ama-feline izidlo ezidla inyama, futhi awadingi okusanhlamvu noma okuphuma kuwo (empeleni, kungadala ukungezwani komzimba). Enye indlela kungaba ukubanika ukudla kwemvelo, ngaphandle kwamathambo noma ameva.
Ngenxa yobude obufushane bezinwele zakhe, kufanele uyihlanze kanye ngosuku, okunye ngesikhathi sonyaka we-molting. Futhi, uma ubona ukuthi inama-legañas unganqikazi ukuwasusa nge-gauze oyinyumba.
Lapho engumdlwane unayonokuthi yini okufanele umyise ukuze agonywe, nokuthi angenwe neutered noma abulawe inzalo uma singafuni ukuyenza izale kusuka ezinyangeni eziyi-6 uma kungowesifazane, noma izinyanga eziyi-8 uma kungowesilisa.
Ngaphezu kwalokho, ngaso sonke isikhathi lapho uzizwa ungaphathekile kahle, kungakuhle ukuthi uhambe.
Akuyona ikati enezinkinga eziningi zempilo, kepha ingaveza ushintsho oluthile lofuzo, njenge i-umbilical hernia o ukwehluleka okungapheli kwezinso. Ngaphezu kwalokho, uma ubona ukuthi ulahlekelwe isifiso sokudla, uphansi, noma unenkinga, kufanele umyise kudokotela wezilwane ukuze amhlole.
Khumbula ukuthi ngokushesha ukuxilongwa kwenziwa, ngokushesha ungalulama.
Kubiza malini ikati lase-Abyssinia?
Ukunakekela ikati kungumthwalo okufanele uhlale impilo yonke yesilwane. Uma uzimisele ngempela ukuyithatha, futhi nomndeni wakho ufuna ukujabulela inkampani yekati lase-Abyssinia, funa abafuyi abangochwepheshe. Bangacela okunye I-800 euro Kumdlwane, kungabonakala njengokuningi, kepha akukho okufana nokuqinisekisa ukuthi ubomvu obusha ozohlanganyela nabo iminyaka embalwa yempilo yakho buphilile.
Izithombe zekati lase-Abyssinian
Ikati lase-Abyssinian liyisilwane esihle, futhi liyathandeka ngasikhathi sinye. Ngakho-ke, sizonamathisela ezinye izithombe zalesi sigaxa esibabazekayo:
Indlela ephelele ye-athikili: Amakati kaNoti » Amakati » Ikati labomdabu
Ngincoma ukuthi ubheke umfuyi osondelene kakhulu nendawo yangakini ukuthola ikati olifunayo.
Amakhambi asekhaya amakati angenamanzi
Kusho ukuthini ukuthi ikati ukukulandela